Banyere Anyị-Kitchen Faucets, ite filler, ụlọ ịwụ fosets
Home / gbasara Anyị
Na WOWOW, anyị kwenyere na ị tozuru oke kachasị mma. Dịka akụkụ nke ebumnuche mbụ anyị ịbanye, ụlọ ọrụ anyị raara onwe ha nye inye gị ihe kachasị mma anyị nwere ike ịnye: ọnụahịa kachasị mma, ngwaahịa kacha mma, ihe kachasị ọhụrụ ọgbara ọhụrụ, yana ndị ahịa niile kacha mma ga-eme ị dị ka eze.
N'ịbụ ndị nọ n'ọma ahịa kemgbe 2008, ụlọ ọrụ nne na nna anyị na-agba mbọ mgbe niile ịnye ngwaahịa dị mma. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị ejirila nlezianya gbasaa nchịkọta anyị iji tinye ihe niile anyị nwere ike maka ụlọ gị:
• Kitchen ngwa: Kitchen fosets na ngwaike na oge a, streamlined na mma-mere. Kụtuo fosetị kichin nke na-egbo mkpa ezinụlọ nke oge a n'ụzọ bara uru yana ọkachamara na nhazi nke ọma.
• Ngwa nke ime ụlọ ịsa ahụ: Anyị na otu ọkachamara ahụ ma tinye ya na ụlọ ịsa ahụ ọ bụla yana. Site na akwa mmiri ruo na ngwa ime ụlọ ịwụ dịka akwa nhicha akwa na akwụkwọ njide akwụkwọ na sistemụ ịsa ahụ zuru oke, a na-enye ya n'ụdị ịchọrọ.
Anyị na-agbanwegharị dị ka usoro njikwa ogo anyị na-eme. Iji na-egboro gị mkpa gị, anyị ga na-eme ike anyị mgbe niile iji wepụta faucets, ngwaike na ngwa ndị kachasị mma, yana ngwa niile kachasị mma, ha niile ka na-etinye mkpado dị ọnụ ala ka ị wee nweta ezigbo ngwugwu.
Njikere ime WOWOW gị go-na ehiwe maka ọkachamara àgwà foset emepụta? Kpọtụrụ anyị taa na [kọntaktị Ama] ma malite njem gị.
* Kedu mmiri na-amasị gị: kichin ụlọ ịwụ ịsa
* Choro. Biko dejupụta nkọwa ị chọrọ ịma dị ka nkọwa ngwaahịa, ọnụahịa, MOQ, wdg.